Jery taratra… herinandro: mampitsanga-mitoetra… | NewsMada
Nilaza ny Ceni fa anarivony ireo fangatahana fitanana an-tsoratra (PV) voarainy fa ny 837 amin’ireo izay avy amin’ny distrika 23 no nekena hanaovana fampitahana PV ary nanatontosana izany. Efatra tamin’izany ihany no nisy tsy fitovian’ny PV. 14 ny PV milaza ny fahitana fototra ny tsy fanjarian’ny fifidianana.
Any amin’ny faran’ny volana septambra no tokony hanaovana ny fifidianana kaominaly, raha ny tolo-kevitry ny Ceni. Hifarana ny 22 septambra ny fe-potoam-piasan’ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna. Raha tsy izany, manendry PDS hitantana ny kaominina ny fanjakana, na manalava izay fe-potom-piasana izay.
Nanatrika ny fankalazana ny faha-100 taon’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa (OIT) tany Genève ny delegasiona malagasy, notarihin’ny filoha Rajoelina Andry. Anisan’ny nambarany tamin’izany ny hanafoanana ao anatin’ny folo taona ny fanandevozana maoderina, ny asa an-terivozona, ny fanararaotana amin’ny asa..
Nihaona manokana tamin’ny Chancelière alemà, i Angela Merkel, ny filoha Rajoelina tamin’izany. Anisan’ny voadiniky ny roa tonta ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny angovo, ny fanabeazana, ny tontolo iainana. Hisy ny delegasiona malagasy avy amin’ny minisitera amin’ireo sehatra ireo ho an’ny Alemaina amin’izany.
Nahatratra 34 ny miaramila naiditra vonjimaika am-ponja, araka ny tatitry ny eo anivon’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafi-bahoaka. Anton’izany ny fanolanana, ny fanaovana herisetra, ny tsy fanajana zon’olombelona… Zava-baovao? Vao tsy ela koa, zandary 36 naiditra am-ponja noho ny antony tsy mifankaiza amin’izay.
Ankoatra ny fiandrasana ny voka-pifidianana mahabe fitarainana etsy sy eroa, eo ny hoe hala-jaza. 824 ny fahaverezan-jaza, ary 725 ny zaza hita, araka ny tatitry ny Polisim-pirenena. Samy mampitsanga-mitoetra izay, na eo amin’ny tontolo politika na ny fiainam-bahoaka ifotony. Mandra-pahoviana ary hanao ahoana?